0000 April 2021
ဂျူဗင်တပ်နဲ့ စီရော်နယ်ဒိုကိစ္စက ပြတ်ပြီးသား စုံတွဲ က Living Together ဆက်နေသလိုဖြစ်နေ
April 30, 2021 Nan Da 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ဂျုဗင်တပ်အသင်းတိုက်စစ်မှုး စီရော်နယ်ဒိုဟာ လာမယ့် ဇွန်လမှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာတော့မှဖြစ်တယ်လို့ အီတလီမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ La Gazzetta dello Sport က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ရှိ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ဂျူဗင်တပ်ကို ၂၀၁၈ […]
မန်ယူအမျိုးသမီးအသင်းသူ တစ်ယောက်လောက်တောင် အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကစားချိန်မရတဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ မန်ယူအမျိုးသမီးအသင်းက ကစားသမားတစ်ယောက်က အေဂျက်ဇ်အသင်းကနေ မန်ယူအသင်းကို ပေါင် ၃၅သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဗန်ဒီဘိခ်ထက် အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ဘောလုံးကစားရခွင့်ရတဲ့ အချိန်ပိုများနေတာ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ မန်ယူအမျိုးသမီးအသင်းက ဂျက်ကီဂရိုနီဟာ ဗန်ဒီဘိခ်ထက် အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ […]
စိတ်ပြောင်းပြီး မန်ယူအသင်းမှာ တစ်ရာသီ သက်တမ်းတိုး စာချုပ်မယ့် ကာဗာနီ
April 30, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြပြီး ဂိုးတွေသွင်းယူနေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး ကာဗာနီ ဟာ လာမယ့်ရာသီ ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်ရှိဖို့ ‌ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကာဗာနီနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ဟာ အခုရာသီအကုန်မှာ […]
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းခွင့်အဖြုန်းဆုံး တိုက်စစ်မှုးမှာ ချဲလ်ဆီးက တီမိုဝါနာဖြစ်နေ
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ဒီရာသီအစမှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ပေါင်သန်း ၂၀၀ ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီး အင်အားဖြည့်တင်းခဲ့တာပါ။ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ လက်ရှိ ရပ်တည်မှုကို ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီး၊ အက်ဖ်အေဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့် ၄နေရာတို့မှာ […]
အသင်းရှုံးနိမ့်ချိန်တိုင်းမှာ ကစားသမားတွေကို အပြစ်တင်တတ်တဲ့ အာတီတာရဲ့ ဒီတစ်ခါသားကောင်က စီဘယ်လော့
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာက ယမန်နေ့ညက ဗီလာရီးရဲကို ၂-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့်တဲ့ ပွဲအပြီးတွင် သူ့ရဲ့ လူရွေးချယ်ပွဲထွက်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါသတကြီး ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ အူနိုင်း အမ်မရီဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ နည်းပြဟောင်းတစ်ဦး […]
စပါးအသင်းရဲ့နည်းပြထိုင်ခုံပေါ်ကို ဘယ်သူကမှ ဝင်ထိုင်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြတော့ဘူးလား?
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ မော်ရင်ဟိုကို ရာထူးကထုတ်ပယ်ပြီး အခုလောလောဆယ် ယာယီနည်းပြရိုင်ယန်မေဆင်နဲ့ စခန်းသွားနေရတဲ့ စပါးအသင်းဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နည်းပြသစ်တစ်ဦးခန့်အပ်ဖို့ အပူတပြင်းကြိုးပမ်းနေပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့မှ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ စပါးအသင်းဟာ နည်းပြသစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ လာမယ့်နှစ်နွေရာသီမှာ အေဂျက်စ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်မယ့် နည်းပြအဲရစ်တန်ဟက်ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ အသင်းဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ လီဗိုင်က […]
အနီကတ်ကြောင့် တင်းရတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောလာတဲ့ နည်းပြကိုးမန်း
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ အနီကတ်အစွမ်း အံ့မခန်းကြောင့် နယ်သာလန်သားနည်းပြကြီးဟာ ဂရန်နာဒါအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နည်းပြ ရော်နယ်ကိုးမန်းကဒုတိယပိုင်းမှာသူ့ကိုစတုတ္ထဒိုင်ကလေးစားမှုမရှိဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအနီကတ်ပြသခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဂရန်နာဒါအသင်းရဲ့ပထမချေပဂိုးသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်နည်းပြကိုးမန်းကစတုတ္ထဒိုင်ကိုစောဒကတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွင်းလယ်ဒိုင်ကကိုးမန်းကိုအနီကတ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနည်းပြကိုးမန်းက“ကျွန်တော့်ကို ဘာကြောင့်ထုတ်သလဲ မသိဘူး။ ကျွန်တော် စတုတ္ထဒိုင်လူကြီးကို မရိုသေလို့လို့ သူတို့က ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို နှိမ်ချတဲ့စကားသာမက […]
UEFAအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ လာလီဂါကိုကျော်ပြီး ထိပ်ဆုံးရောက်လာတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အခုဆိုရင် UEFA ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့်(၁)နေရာကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ဟာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိတက်ရောက်ထားပြီး ပထမအကျော့ပွဲတွေမှာလည်း ရလဒ်ကောင်းတွေ အသီးသီးရယူနိုင်ခဲ့ကြသလို […]
စမောလင်းဟာ ယူနိုက်တက် လွှတ်ထားတဲ့ ဒလန်လား?
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်း စမောလင်းက မနေ့ညက ယူရိုပါလိဂ်ပွဲမှာတော့ အသင်းဟောင်းနဲ့ တစ်ကျော့ပြန်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအသင်းအတွက် အကျိုးမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စမောလင်းဟာ ရိုးမားအသင်းရဲ့ခံစစ်ကြောင်းကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပေမယ့် မနေ့ကပွဲမှာတော့ ခြေစွမ်းကပုံမှန်ထက်ကျဆင်းနေခဲ့ပြီး အမှားတွေလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အသင်းက […]
မက်ဆီကို (၁၀)နှစ်အထိသက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာ
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့အဓိက ကစားသမားဖြစ်တဲ့ မက်ဆီကို (၁၀)နှစ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲ ကစားသမားဘဝကုန်ဆုံးသွားမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့ လက်ရှိစာချုပ်က လာမယ့်နွေရာသီကျရင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး သူ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်း အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေတာပါ။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ မက်ဆီဟာ […]